ကိုဗစ်၁၉-ကိုယ်ကျိုးအတွက် လူထုရဲ့အသက်တွေနဲ့ ကစားတာကို ဘယ်လိုမှသည်းမခံနိုင် လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြော
ကိုဗစ်၁၉-ကိုယ်ကျိုးအတွက် လူထုရဲ့အသက်တွေနဲ့ ကစားတာက...
6 เม.ย. 2563 - 12:47 น.
ကိုဗစ်၁၉ ရောဂါ ကာကွယ်ရေးအတွက် ပြည်သူတွေလိုအပ်နေတဲ့ နှာခေါင်းစည်း mask တွေကို အဆမတန်ဈေးတင်ရောင်းသူတွေဟာ လုံးဝမလုပ်သင့်တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပြီး ဥပဒေအရ အရေးယူမယ်လို့ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သတိပေးလိုက်ပါတယ်။
ဧပြီ ၆ ရက်မနက်က ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးက တာဝန်ရှိသူသုံးဦးနဲ့ အင်တာနက်ကတစ်ဆင့် တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ဆွေးနွေးရာမှာ ပေါက်ခေါင်းပြည်သူ့ ဆေးရုံအုပ်ကြီး ဒေါက်တာအေးငြိမ်းရဲ့ တင်ပြချက်ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အခုလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံမှာ နှာခေါင်းစည်းတွေ ဧပြီတစ်လစာအတွက် ၆ ဒသမ ၃ သန်းရှိတယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ဧပြီ ၅ ရက်က ဖော်ပြခဲ့ ပါတယ်။ အဲဒီဖော်ပြချက်နဲ့ ဆက်စပ်ပြီးဒေါက်တာအေးငြိမ်းက တင်ပြခဲ့ရာမှာပဲခူးတိုင်းတစ်ခုတည်းမှာတင် လူထု ၅.၂ သန်းရှိပြီး လူတိုင်းကို နှာခေါင်း စည်းတွေ ပံ့ပိုးပေးဖို့ လောလောဆယ်မဖြစ်နိုင်ကြောင်း၊ လိုအပ်တဲ့နှာခေါင်းစည်းတွေကိုအပြင်ကနေ ဝယ်တဲ့အခါ တစ်ခုကို ငါးဆယ်တန်လောက်ကို ငါးရာတစ်ထောင်ပေးဝယ်နေရပြီး အရည်အသွေးလည်းမကောင်းကြောင်း တင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က နှာခေါင်းစည်းတွေကို အများကြီး ထပ်မှာထားကြောင်းနဲ့ နေ့စဉ်ထုတ်လုပ်မှု တိုးလာတဲ့အတွက် အစိုးရအနေနဲ့လည်း တက်နိုင်သမျှ တိုးမှာနေကြောင်း၊ ပြည်တွင်းမှာထုတ်နိုင်မလားဆိုတာလည်း ကြည့်နေကြောင်းနဲ့ ပြည်တွင်းမှာထုတ်နိုင်ရင်တောင်မှ ပြည်ပကနေလည်း ဆက်မှာရဦးမှာဖြစ်တယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါနဲ့တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ နှာခေါင်းစည်းဈေးတင်ရောင်းသူတွေကို အရေးယူမယ့်ဥပဒေ လည်းထုတ်ထားပြီးဖြစ်လို့ ဥပေဒအရအရေးယူမယ်လို့လည်း ပြောကြားသွားပါတယ်။
"ဒီဟာက ဥပဒေနဲ့လည်းမကိုက်ညီဘူးနော်။ ဥပဒေအရလည်း ကျွန်မတို့ အရေးယူလို့ရတယ်။ ဒီလို ဟာမျိုးတွေ မလုပ်ရဘူဆိုတာဥပဒေထုတ်ထားတယ်။ ကျွန်မတို့သိလို့ရှိရင်လည်း အရေးယူမယ်။ ဒါဟာ ကိုယ်တစ်ဦးချင်းရဲ့ အကျိုးအမြတ်အတွက် ပြည်သူလူထုရဲ့ အသက်တွေနဲ့ ကစားတဲ့သဘောပဲ။ အဲဒါတော့ ကျွန်မတို့ ဘယ်လိုမှ သည်းညည်းမခံနိုင်ဘူး" လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ကိုဗစ်၁၉ ရောဂါ ကာကွယ်ကုသရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကျန်းမာရေးအထောက်အကူပြု ပစ္စည်းတွေ၊ ဆေးဝါးတွေနဲ့ စားသုံးကုန်တွေကို အရေးကြီး ကုန်စည် အဖြစ် သတ်မှတ်ထားပြီး ဒီကုန်စည်တွေကို ဈေးတင်ရောင်းတာ၊ ဖြန့်ဖြူးတာ၊ ဈေးကစားဖို့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ သိုလှောင်တာတွေကို တားမြစ်ကြောင်း စီးပွားရေးနဲ့ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက မတ် ၃၀ မှာ ကြေညာချက်ထုတ်ထားပါတယ်။
အဲဒီတားမြစ်ချက်ကိုဖောက်ဖျက်ရင် အရေးကြီးကုန်စည်နဲ့ ဝန်ဆောင်မှုဥပဒေပုဒ်မ ၅ အရ အရေးယူခံရမယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
ဥပဒေအရ အရေးယူမှာဖြစ်သလို တစ်ဖက်မှာ ဒီလိုလုပ်ရက်သူတွေအနေနဲ့ ဒီလောက်တောင်မှ ကိုယ့်နိုင်ငံ၊ ကိုယ့်ပြည်သူလုထု ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာ အခက်အခဲတွေ့နေတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ့်အတွက် အကျိုး အမြတ် ထုတ်မယ်ဆိုတာ စဉ်းစားနေကြမှာလား လို့ သူက ဆက်ပြောပါတယ်။
"အဲဒီလိုလူတွေကို အားမပေးပါနဲ့။ ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဆီက ဝယ်ခြင်းဟာ ကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက် တဒင်္ဂ မက်စ် ဘယ်နှခုဝယ်နိုင်မလဲ သူတို့ရောင်း တဲ့ဈေးနဲ့။ ကိုဗစ် အားလုံးပြီးသွားတဲ့အထိ ဒီမက်စ်တွေက ခံမှာ လား။ ဒီလိုလူတွေကို အားမပေးပါနဲ့လို့ ပြည်သူတွေကို ကျွန်မ မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်။ ဒီလိုလူတွေ ကိုသိရင်လည်း သက်ဆိုင်ရာ အကြောင်းကြားပါ။ ကျွန်မတို့အရေးယူမယ်။ ဒါက တိုင်တာတောတာ ၊ သူများဒုက္ခရောက်အောင် လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ အများဒုက္ခမရောက်အောင်လို့ ကာကွယ်တာဖြစ်ပါတယ်" လို့ ဆိုပါတယ်။
ပြည်သူတွေလိုအပ်နေတဲ့ပစ္စည်းကို လိုအပ်နေတဲ့အချိန်မှာ ဈေးတင်ရောင်းတာဟာ သည်းခံပြီးတော့ လွှတ်ထားလို့ရမယ့်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလို့လည်း ဆိုပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ကိုဗစ်၁၉-ကိုယ်ကျိုးအတွက် လူထုရဲ့အသက်တွေနဲ့ ကစားတာကို ဘယ်လိုမှသည်းမခံနိုင် လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြော